जनमत पार्टीका कार्यकर्ताद्वारा सवारीसाधन तोडफोड, ६ जना गिरफ्तार – इन्सेक
जनमत पार्टीका कार्यकर्ताद्वारा सवारीसाधन तोडफोड, ६ जना गिरफ्तार
धनुषा ०७८ माघ १३ गते
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी जनमत पार्टी धनुषाले जनकपुरधाममा माघ १२ गते गरेको लाठी जुलुस प्रदर्शनको क्रममा सो पार्टीका कार्यकर्ताले सवारीसाधनमा तोडफोड गरेका छन् ।
तोडफोडको आरोपमा सो पार्टीका ६ जना कार्यकर्तालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले गिरफ्तार गरेको छ ।
सरकारी गाडीमा तोडफोड गरको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनमत पार्टीका कार्यकर्ता सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका–१ का १८ वर्षीय अर्जुन साह, महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका–४ का ३५ वर्षीय राम विदेही पासमान, धनुषाको औरही गाउँपालिका–५ का ३० वर्षीय विलेश मण्डल, सप्तरीको कञ्चनरुपा नगरपालिका–१ का २८ वर्षीय पप्पु पञ्जियार, सप्तरीको तिलाठीकौलारी गाउँपालिका–२ का ३१ वर्षीय सुशील कुमार मण्डल र सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका–४ का २२ वर्षीय जिवछ यादवलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले गिरफ्तार गरेको हो ।
जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको भिडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले ४२ राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो ।
प्रहरीले भैरवचोकमा १९ राउण्ड अश्रुग्यास, रामचोकमा नौ राउण्ड अश्रुग्यास र पिडारीचोकमा १४ राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका डिएसपी दिपककुमार रायले बताउनु भयो ।
भिडलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा इन्स्पेक्टर अवधेशकुमार यादव, प्रहरी इन्स्पेक्टर बेचन यादव, प्रहरी जवान नवराज रेग्मी, सई विनोद पासवान घाइते भएको डिएसपी रायले बताउनु भयो ।
जनमत पार्टीद्वारा सरकारी गाडीमा तोडफोड
जनमत पार्टीले जनकपुरमा माघ १२ गते गरेको आन्दोलनमा सो पार्टीका कार्यकर्ताले सरकारी गाडीलाई लक्षित गरी तोडफोड गरेको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१० देवीचोकमा सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाका मेयर रामऔतार यादव सवार बा.२ झ.२३१६ नम्बरको गाडीमा तोडफोड गरेको छ ।
गाडीको अगाडि र बाँया साइडको सिसा फुटेको छ । रामानन्दचोकमा जलेश्वर अस्पतालका प्रमुख डा. सतिशकुमार साह सवार प्रदेश २–०२–००१ झ. ०१६३ नम्बरको गाडीमा तोडफोड गरिएको छ ।
गाडीको अगाडि र पछाडिको सिसा फुटाइएको छ । गाडीमा सवार डाक्टर साहको ओठ र मुखमा चोट लागेको छ ।
डा.सतिश साहको उपचार प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा भइ रहेको छ । डा. साहको दाँत भाँचिएको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–३ जानकी मन्दिर छेउमा सडक विभाग कार्यालय मुजेलियाका इञ्जिनियर बेचनकुमार भण्डारी सवार बा.२ झा ३२२० नम्वरको गाडीमा तोडफोड गरिएको छ । गाडीको अगाडि भागको सिसा फुटाइएको छ ।
सर्लाहीका प्रदेश सांसद अशोक यादव सवार प्रदेश २–०२–००१ झ.००१८ नम्बरमा तोडफोड गरिएको छ । गाडीको अगाडि र पछाडिको सिसा फुटाइएको छ ।
सांसद यादवको दाँहिने हात भाँचिएको छ । उहाँको उपचार जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टरमा भइरहेको छ ।
गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका उपमेयर मिनाकुमारी यादव सवार २–०२–००१ झ.००८० नम्बरको गाडीमा तोडफोड गरिएको छ ।
तोडफोडको क्रममा उपमेयर यादवको आँखामा सिसा परेको छ । उहाँको उपचार जानकी आँखा अस्पतालमा भइरहेको उपमेयर मिना यादवले बताउनु भयो ।
सो गाडीका चालक गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–३ भरतपुरका लक्ष्मीकुमार यादवको हातमा चोट लागेको छ । उहाँको उपचार प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा गरिएको छ ।
सर्लाही जिल्लाको हरिवन नपाका मेयर सवार २–०३–००१ झ.००२० नम्बरको गाडीमा तोडफोड गरिएको छ ।
गाडीमा सवार मेयर गणेश प्रसाई र उपमेयर रेणुका पौडेल घाइते हुनुभएको छ । सर्लाहीको कविलासी नपाका मेयर सवार ना.१ झ.१६७४ नम्बरको गाडीमा तोडफोड गरिएको छ ।
गाडीको सिसा फुटाइएकोे छ । गाडी चालक सर्लाहीको कविलासी नपा–९ का ४० वर्षीय सञ्जिवकुमार रायको पाखुरामा चोट लागेकाले उहाँको उपचार जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टरमा भइरहेको छ ।
लाहान नगरपालिकाका मेयर मुनि साह सुडि सवार गाडीमा समेत तोडफोड गरिएको छ । मेयरसँगै रिपोर्टिङका लागि आएका सिरहाका पत्रकार जिवछ यादवका अनुसार लहान नगरपालिकाका मेयर सवारमा गाडीमा पिडारीचोकमा जनमत पार्टीका कार्यकताहरूले तोडफोड गरेको हो । गाडीको अगाडि र पछाडिको सिसा फुटाइएको छ ।